Fiqi: Reer Kismaayo dhulka inuu ku socdo waa u diideen Xaaji Muuse Suudi Yalaxow
Thursday October 10, 2019 - 23:49:46 in Wararka by Mogadishu Times
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay qaabkii magaalada loogu soo dhoweeyey wafdigii uu ka midka ahaa ee uu ku jiray Senator Muuse Suudu Yalaxow. Fiqi ayaa sheegay in habka loo sharfay, xitaa ay dadka Kism
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay qaabkii magaalada loogu soo dhoweeyey wafdigii uu ka midka ahaa ee uu ku jiray Senator Muuse Suudu Yalaxow. Fiqi ayaa sheegay in habka loo sharfay, xitaa ay dadka Kismaayo diideen in Muuse Suudi dhulka socdo, oo ay xambaareen sida uu hadalka u dhigay. Qoraal uu Fiqi soo dhigay bartiia facebook hoos ka aqriso.
Senator Alxaaji Muuse Suudi Yalaxow oo reer Kismaayo u diideen inuu cagahiisa ku socdo ayagoo soo dhoweyn heer Sare ah oo hawada sare ah ku soo dhoweeyey.Dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah taariikhda waxey aheyd markii koowaad In todobaadyadii la soo gudbey ay cid sheeganaysa madaxtinimo Soomaaliyeed ay isku dayaan In isku socodkooda ay xannibaad kala dhex dhigaan, waxey noqon doonaan todobaadyadaas kuwo taariikhda qeybteeda madow u gala ciddii soo curisay, kuwii taageeray iyo kuwii fuliyey ficilkaas xaasidnimada ah.
Dadkaan iyo dalkaan gumeystihii ayaa kala celin waayey, waxaan ceeb ahayn kama dhaxlayaan kuwii isku daya kala xannibkooda.